Maitiro ekutengesa kuAmazon: mitengo, mhando dzevatengesi uye matanho | ECommerce nhau
Amazon nderimwe remasimba makuru epasirese. Iyo ine zvese uye kwete chete kuti inotengeswa nekambani, asi zvakare inobvumidza vamwe vatengesi kuti vawane chikuva chayo. Zvisinei, Ungatengesa sei paAmazon?
Kana iwe usingazive kuzviita uye uchida kuwedzera bhizinesi rako, tiri kuzokuudza nezve zvese zvaunoda kuziva: mhando dzevatengesi, imarii iyo Amazon inobhadharisa kutengesa uye maitiro ekunyoresa papuratifomu.
1 Marii yakawanda iyo Amazon inotengesa kutengesa muchitoro chayo?
2 Mhando dzevatengesi paAmazon
2.1 Mutengesi wega
2.2 Nyanzvi mutengesi
3 Matanho ekutengesa kuAmazon
3.1 Nhanho 1: Enda kuMutengesi Central
3.2 Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 2: Gadzira zvigadzirwa zvako
3.3 Nhanho 3: Usakanganwa nezve mafoto
3.4 Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 4: isa mutengo wakanaka
3.5 Nhanho 6: Sarudza kuti ndiani anotakura
3.6 Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 7: mabhenefiti 'e' riini
Marii yakawanda iyo Amazon inotengesa kutengesa muchitoro chayo?
Kuva mutengesi kuAmazon hakuna mahara. Vanokuchaja kuti uvepo uye utengese, nekuti ivo vanofanirwa kutora komisheni yekupa kuoneka kune zvakawanda zvigadzirwa mukatalog yavo. Nekudaro, ndeimwe yenzvimbo dzine akawanda nyaya. Asi ivo vanobhadharisa marii chaizvo? Ndo zvatichazokutsanangurira zvinotevera.
Kunyoresa kwemwedzi. Iyi ndiyo mari yekutanga yauchazosangana nayo. Iyi ndiyo mari inobhadharwa neAmazon munhu wese anoda kuve mutengesi kuAmazon. Ndokunge, iyo "mari yekupinda" iyo inobvumidza iwe kutengesa. Mutengo wayo ndeye € 39 pamwedzi.
Referral muripo. Ndo izvo zvaunofanirwa kubhadhara Amazon nguva imwe neimwe apo kutengeswa kunoitwa. Iyo muzana inoenderana nechikamu pane chigadzirwa (saka, mukutsvaga kwako, wawana zvigadzirwa zvaungaisa mune mamwe mapoka). Uye ndeyekuti musiyano wepesenti unogona kubva kubva pa5 kusvika pa45%.
Tengesa mari yekuvhara. Izvi zvakagadziriswawo. Chero chaunotengesa, ivo vachakubhadharisa 0,99 euros pachigadzirwa chimwe nechimwe, zvisinei nemutengo wauinayo.
Mari yekutengesa kwechinhu. Iyo ine hukama neMusika, nekuti pano ivo vanogona zvakare kukuchaja iwe pakati pe0,81 ne1,01 euros. Chinhu chakanaka ndechekuti ndeyemitambo yemavhidhiyo chete, software, maDVD, mabhuku nemumhanzi.
Mhando dzevatengesi paAmazon
Usati watanga kuva mutengesi kuAmazon, iwe unofanirwa kuziva kuti kune maviri marudzi emaakaunzi, mumwe mutengesi, uye nyanzvi imwe. Mhando yega yega ine mamiriro akasiyana, uye iwe unofanirwa kuteerera, nekuti makomisheni, pamwe nematanho, akasiyana.
Mumwe mutengesi mumwe ndiye anoonekwa seAmazon hautengese zvinhu zvinodarika makumi mana pamwedzi. Zvakare, ivo vanongofanira kubhadhara pavanotengesa chaiko, uye inogona kunge iri sarudzo inoshanda kwazvo kutanga kushanda pachikuva chikuru ichi, nekuti hauzive chaizvo kana uchazotengesa chimwe chinhu.
Kana zviri zvemitengo iyo iwe yaunobhadharisa iwe, ivo vanowanzo kubva kubva pa5 kusvika ku45% mwero wekutumira / (zvinoenderana nechikamu) uye padiki mwero wekuvhara kutengesa (uko kwakagadziriswa, pa0,99 euros).
Kana iyo yapfuura yaive imwe iyo yaisatengesa zvinodarika makumi mana zvinhu pamwedzi, mune iyo nyanzvi mutengesi, ivo vachatofanira kutengesa zvimwe zve izvo zvigadzirwa. Uye nekudzoka, iwe unobatsirwa kubva kune zvimwe zvakanaka paAmazon.
Paunenge uchigadzira iyo nyanzvi mutengesi account, inogona kutengeswa muzvikamu zvese zveAmazon (mune zvemunhu iwe uchaganhurirwa); Uye zvakare, iwe unogona zvakare kugadzira zvigadzirwa zvitsva, kuve nemimwe mishumo, kurodha yako hesera ...
Ndeapi makomisheni? Zvakanaka, 7% mari yekuendesa. Hapana chimwe. Hakuchina mamwe makomisheni aunofanirwa kubhadhara kupfuura izvo.
Matanho ekutengesa kuAmazon
Zvino, isu tichaenda kukudzidzisa iwe kuti ungatengesa sei paAmazon. Uye isu tichazviita nhanho nhanho nekuti inogona kuve inovhiringidza, asi nemirairo yedu unogona zvirokwazvo kuzviita nyore.
Nhanho 1: Enda kuMutengesi Central
Seller Central ndeyeAmazon yekutengesa hub uye ndicho chinhu chekutanga chaunoda kunyoresa semutengesi. Yayo url ndeye: https://sellercentral.amazon.es
Pano iwe uchafanirwa kunyoresa neemail yako uye password uye, kana uchinge uri mukati, uchafanirwa kupa ruzivo rwekambani yako, nyika, kiredhiti kadhi, ruzivo rwebhangi, nhamba yefoni uye zvemunhu ruzivo. Apa ndipo pauchazobvunzwa kuti usarudze pakati pemaakaundi maviri: mumwe mutengesi uye nyanzvi mutengesi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti izvi hazvisi zvega, ndiko kuti, iwe unogona kutanga semunhu mutengesi wobva waenderera kune nyanzvi (kana imwe nzira yakatenderedza).
Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 2: Gadzira zvigadzirwa zvako
Kana iwe wakasaina seunyanzvi mutengesi, iwe une mukana wekuisa zvese zvigadzirwa panguva imwe chete, kunyangwe kana uchifanira kuzviongorora gare gare. Panyaya yemutengesi wega, iwe unofanirwa kukwira pane imwe panguva. Zvinoitwa sei? Iwe uchazviita muInventory, kwaunowana bhatani ku «Wedzera chigadzirwa".
Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva izvo, usati waisa, Amazon inokuudza iwe utarise icho chigadzirwa, Pamwe neiyo barcode kana neiyo EAN kodhi, kana zita, nekuti chakachengeteka chinhu ndechekuti ichave iine mune yayo katarogu uyezve ichakuisa iwe seumwe mutengesi weichi chigadzirwa.
Paunenge uine icho chigadzirwa chauri kutsvaga, iwe unenge uine sarudzo dzakasiyana, saka iwe unongofanirwa kusarudza chigadzirwa icho chiri, zadza iyo isipo data uye ndizvozvo.
Kana icho chigadzirwa chikasabuda, iwe uchafanirwa kuchigadzira kubva pakutanga nekusarudza chikamu uye subcategories zvakanyanya maererano nechako chigadzirwa. Pano pane zvakati omei sezvo uchifanira kuzadza iro rese chigadzirwa ruzivo (sezvo nenzira iyi unove nechokwadi chekuti Amazon inoisa iyo yepamusoro kana yapera).
Nhanho 3: Usakanganwa nezve mafoto
Mifananidzo yacho ndeyechokwadi yekuda kwevanogona kuve vatengi, saka unofanirwa kuisa mapikicha akanaka, ari emhando yepamusoro uye pamusoro pezvese izvo chigadzirwa chinotaridzika zvakanaka. Kana iwe ukaisa mapikicha ari madiki kwazvo, kana uko iko ruzivo rwusingaonekwe zvakanaka, pakupedzisira haugone kutengesa nekuti ivo havazovimba nezvaunovatumira (kunyangwe zviri izvo zvakanakisa).
Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 4: isa mutengo wakanaka
Nhanho inotevera kana zvasvika pakuziva kutengesa kuAmazon ndeyekusimbisa kuti mutengo wechigadzirwa chako chii. Mune ino kesi, iwe haufanire chete kufunga nezve icho chikuva chichakubhadharisa iwe, asi zvakare mutengo wemakwikwi ako.
Kana iwe ukaisa mutengo wakaderera pane wako makwikwi, saka une mukana uri nani wekutengesa nekuti iwe unopa yakachipa pashiri. Asi izvo zvinogona kuita kuti iwe urasikirwe, saka chenjera neizvi.
Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe utarise, kwete kuAmazon chete, asi zvakawandisa pasi rese reInternet kuti uone kuti ndeupi mutengo wavanoisa uye wozoyera kana mutengo uye mabhenefiti aunowana akakwana. Zvikasadaro, zvingave zvirinani kusaisa icho chigadzirwa, kana kuchiisa pamutengo wakati kwirei.
Nhanho 6: Sarudza kuti ndiani anotakura
Ehe hongu, iwe waifunga here kuti kuve mutengesi iwe waizofanira kuve nehanya nekutakura pachako? Haufanire kudaro. Kana chigadzirwa chatengeswa, Amazon inotumira iwe email inokupa iwe ruzivo rwevatengi kuitira kuti iwe ugone kuenderera uchiendesa mukati menguva yakatarwa yacho.
Nekudaro, zvinogona zvakare kuve nyaya yekuti iwe haudi kutarisira zvekutakura kana kugadzirisa kudzoka uye nezvimwe zvine hukama. Ndipo panopinda runhare "Kuzadzikiswa neAmazon". Iri basa uko iyo kambani pachayo ine basa rekutumira zvese.
Ehe, ivo kuti vave nezvigadzirwa zvako, unofanira kuzvitumira kwavari kutanga, asi usazvidya moyo, kana uchinge wazviisa, unongofanirwa kubaya pane chigadzirwa woisa: "Tumira kana kutangazve zvinyorwa" uye ipapo ivo vanozo kukupa iyo data yekutumira iwo mapakeji kuti vagone kubata zvigadzirwa ivo pachavo.
Maitiro ekutengesa paAmazon nhanho 7: mabhenefiti 'e' riini
Kuita kuti zvive nyore kwauri, isu tinokuudza kuti Amazon inobhadhara mushure memazuva gumi nemashanu, saka haugamuchire iyo mari nekukasira, asi mazuva gumi nemashanu mushure mega kutengeswa.
Icho chikonzero chiri nyore, uye ndechekuti, kana iwe ukatenga chigadzirwa kuAmazon, une mazuva akati wandei ekuchidzosa, kuitira kuti Amazon inobata iyo mari kusvikira yaona kuti mutengi haasi kuzodzoka chigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ungatengesa sei paAmazon